Axmed Madoobe”Cabashada ugu badan waxay ka timaadaa dacwadaha dhulka laysku haysto” – Idil News
Axmed Madoobe”Cabashada ugu badan waxay ka timaadaa dacwadaha dhulka laysku haysto”
Qudbad dheer oo Madaxweynahu uu u jeediyay Baarlamaanka ayuu kaga hadlay arimo kala duwan isagoo si gaar ah ugu dheeraaday wadashaqaynta Hay’adaha Dowlada iyo iska warqabkooda.
Madaxweyne Axmed Maxamed Islaam wuxuu sheegay in hawl walba oo u baahan in la qabto ayna ka maarmaynin si wada jir ah in loo wajaho isla markaana la is garabsado marka laga hadlayo Hay’adaha Dowlada dhexdooda.
Arimaha dhulka ayuu Madaxweynahu sheegay in Xukuumada cabashooyinka ugu badan ay uga imaanayaan si taas loo yareeyana sida ugu dhaw loo dhisi doono gudiga adeega garsoorka oo dib u habayn balaadhan lagu samayn doono hanaanka garsoorka Jubbaland.
Hanaanka qaybsiga khayraadka ayuu Madaxweynahu xusay in ay u baahan tahay heshiis wada jir ah oo laga gaaro si aanay hadhow muran uga iman wax la isla ogyahayna la meel mariyo.
“Dowlada Federaalka ah waxay xuquuq u leedahay iyo waxa ay Dowladaha xubnaha ka ah leeyahiin waa in ay cadaataa oo hadhow aan la isugu imaan muran iyo dood” ayuu yiri Madaxweynuhu.
Madaxweyne Axmed Maxamed Islaam waxaa kale oo uu ku dheeraaday sida Madaxda Dowlada Fadraalka ah looga baahan yahay in ay talooyinka ka qaataan dadka wax galka ah ee doonaya in wadanku uu hagaago.
“Bulshadii waxay u kala qaybsantay labo nooc kuwo khalad iyo saxba amaan ku huwinaya iyo kuwo dhaliil iyo moral xumo la wareegaya labadaas noocba waxaan u baahanahay in aan ka fogaano oo meel dhexe aan wax ku cabiro” ayuu yiri,Axmed Maxamed Islaam.
Gaba gabadii Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa maanta oo Talaado ah 15, August 2017 si rasmi ah usoo xiray Kal-Fadhigii sadexaad ee Golaha Baarlamaanka Jubbaland.